आस्थाको डोरी - Rajdhani Daily News
राजधानी समाचारदाता - April 2, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीमा आफनै बारीमा बाँस काटन गएका एक किशोरको मृत्यु भएको छ ।मृत्यु हुनेमा बसबरीया गाउँपालिका वडा...
कालीगण्डकीमा डुंगा दुर्घटना, १ बेपत्ता, ३ जनाको उद्दार
शोभा जिसी - April 2, 2020 0
नवलपुर । पूर्वी नवलपरासीको बुलिङ्गटार गाउँपालिका ३ स्थित कालीगण्डकी नदीमा डुंगा दुर्घटना हुँदा १ जना वेपत्ता भएका छन् ।
रामजन्मोत्सव: मन्दिर बाहिर ताल्चा, श्रद्धालु बिनाको पूजा (फोटो फिचर)
सुजीतकुमार झा - April 2, 2020 0
जनकपुरधाम । भगवान रामको ससुरालीमा आज रामजन्मोत्सवको कुनै चहल पहल छैन । मन्दिरमा भक्तजनलाई सुरक्षाकर्मीहरुले आउनै दिएका छैन भने धेरैजसो घरवाटै निस्केका...
काठमाडाैं । चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा फहराउदैँ नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइड बडी जहाज अष्टे«लिया उड्दैछ ।...
राजधानी समाचारदाता - March 29, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने...
प्रशान्त वली - April 2, 2020 0
काठमाडौं । नेपालमा थप १ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँग कोरोना भाइरसको संक्रमिकतको संख्या ६ पुग्यो । उनी...
नवीन लुइटेल - April 2, 2020 0
काठमाडौं । उपत्यकाबाहिर कोरोना (कोविड १९) नमुना परीक्षण धमाधम भइरहेको छ । मंगलबार परीक्षणको लागि मेसिन पुगेपछि अब सातवटै प्रदेशमा नमुना परीक्षण...
एजेन्सी - April 1, 2020 0
लन्डन । युरोपियन फुटबलको सर्वाेच्च निकाय –यूईएफए)ले यो सिजनको इंग्लिस प्रिमियर लिग मे महिनामा सुरु गरेर जुलाईमा सक्ने योजना अघि सारेको छ...
कोरोना भाइरसको संक्रमण (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी महामारी फैलिरहँदा त्यसले नेपालको जनजीवन पनि पूर्णरूपमा प्रभावित भइरहेको छ । सरकारको लगातारको लकडाउनले विशेषगरी यहाँका गरिब...
डा. देवीप्रसाद आचार्य - April 2, 2020 0
प्यारा विद्यालय शिक्षापरीक्षा स्थगनको कथा, व्यथा वा हौसलाको अवस्थामा रहेका भाइबहिनीहरू ! यस वर्षको एसईई चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुँदै थियो...
कृष्णहरि बास्कोटा - April 2, 2020 0
रामसूदन तिमल्सिना - April 1, 2020 0
कुनै प्राकृतिक प्रकोप, महामारी तथा ठूला घटना भएको समयमा पत्रकार अझ सक्रिय हुन्छन् । पत्रकारिता पब्लिक सर्भिस हो । यो कहिल्यै पनि...
डा. विनोद घिमिरे - April 1, 2020 0
Home प्रदेश आस्थाको डोरी
जनैपूर्णिमामा महाबु (गाथ) मेला दुई दिन लाग्छ । कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा उच्च स्थानमा महाबुमेला लाग्दै छ । समुन्द्री सतहदेखि ४ हजार १ सय ६८ किलोमिटर उचाइमा पर्छ, यो ठाउ“ ।
बर्सातमा लाग्ने भएकाले यहाँ बिहानीपख सूर्योदयसँगै घामका किरण शरीर तातिए पनि छिनछिनको हुस्सु र कुहिरोले महाबुमेला लाग्ने पाटनलाई ढाक्ने हुनाले जाडो पनि उत्तिकै महसुस हुन्छ । छिनछिनमै घाम र कुहिरोको लुकामारीले महाबुमेलामा मनोकांक्षा लिएर गएका हजारौं भक्तजन आनन्द लिने गर्छन् ।
अधिकांश मोबाइलमा वा क्यामरा कुहिरो र घामको लुकामारी कैद गर्ने गरेका छन् । कुहिरो र हुस्सुलाई घामले हटाएपछि महाबु पाटनबाट बझाङका अपी र सैपाल हिमाल र तराईको बर्दिया टीकापुर फाँटको दृश्य हेर्दा शिवपार्वतीले तपस्या गरेको ‘पाटन यही नै हो’ भनेर भक्तजन लख काट्ने गर्दछन् ।
पाटनका बीचबीचमा ससाना ताल, नजिकै केही गाईगोठ र वरपर चौरमा भेडाबाख्रा चरनले महाबुको महिमा बेग्लै देखिन्छ । कसैले शान्तिभूमिको संज्ञा दिन्छन् भने कोही शिवपार्वतीले तपस्या गरेको हुन सक्ने आँकलन गर्दछन् । कतैतिर बुकी फुलेर सेताम्य छ ।
अन्य रंगीविरंगीले फूलले विवाहमण्डलझैं सि“गारिएको देख्दा भक्तजनको आँखा फूलको यौवनबाट यताउता लिन कसैको फुर्सदै हु“दैन । हावाको सिरेटोसँग फूल हल्लिरहेको हेर्न उत्तिकै आनन्द आउँछ, पाटनमा ।
अर्कोतिर हरियो घाँसपात र भेडाबाख्रा, गाईगोरु चर्दै गरेको दृश्यले पाटन सिंहासनमा बसेको शालीन शासकको जस्तो
पनि देखिन्छ । चारैतिर समतल फाँट बीचबीचमा ससाना ताल, वरिपरि हरियो घना जंगलले गर्दा झनै शालीन स्वभावको देखिन्छ, महाबु । कुहिरो, बादल, तराई फाँट र पहाडका हिमशृंखलाका दृश्यले देख्न पाइने हुँदा धरोहरको संज्ञा दिन्छन् त कसैले ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने वनस्थली हो भनेर आँकलन गर्दछन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार र त्यहाँका जनता ‘सुनको शिरानीमा सुतेर नुनको खोजी गर्दै हि“ड्ने’लाई गिज्याइरहेझंै लाग्छ, महाबुगाथले । अधिकांश नेता, बुद्धिजीवी र कर्मचारीको घरको एक कोठामा भारतीय र नेपाली नायकनायिकको तस्बिरले कोठा सजिएका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाम दैलेखदेखि ४५ किलोमिटर सवारीसाधनको यात्रा र आधा घण्टा पैदलयात्रा सकिएपछि मात्र भेटिन्छ, महाबुगाथ । महाबु गाउँ नाम पनि महाबु लेकबाट राखिएको हो ।
साबिकको भवानी र बालुवाटार गाविस सिमानास्थित लिस्ने उकालो सबैभन्दा डर लाग्दो छ । त्यस भेगतिर सधैंजसो आवतजावत गर्ने व्याक्तिले सजिलैसँग लिस्ने उकालो पार गरे पनि तराई र अन्य ठाउ“बाट आएका भक्तजनलाई हम्मेहम्मे पर्दछ । पहाडी चट्टान सीधा ठाडो उकालो लिस्नो (भ¥याङ)जस्तै भएकाले त्यसको नाम
‘लिस्ने’ नामकरण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले महाबुगाथमा मनोकांक्षा पूरा गर्न आएकाले टाढाटाढाका पाहुनालाई १९ वटा त्रिपाल दिएर बसोबास व्यवस्था गरेको थियो । जिल्लामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटकीय स्थल चिनाउन तीन महोत्सव गरे पनि महाबुगाथ मेला गर्न कुनै निकायले चासो
दिएको छैन ।
अधिकांश महोत्सव पैसा कमाउने माध्यम मात्र भएको जिल्लावासीको गुनासो छ । जिल्लामा गठित जिल्ला पर्यटकीय पूर्वाधार समिति पनि यो मेलाबारे बेखबर छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा दैलेखका क्षेत्र १ र २ का सांसद महाबुगाथको जति गाना गाए पनि बजेट विनियोजन नगरी कार्यकर्ता पाल्ने काम गरेको जिल्लावासीको आरोप छ ।
१९ साउन २०७१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद् भवनमा सम्बोधनका क्रममा ‘नेपालमा साहसिक पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको’ बताएका थिए । तर, हिमाली जडीबुटीको घरभन्दा आनन्दले थपडी मार्ने नेतालाई महाबुगाथले एकपटक सोच्नुपर्ने बाध्यता बनाएको छ ।
दैलेख र कालीकोट सिमानामा रहेको पवित्र महाबु लेकमा लाग्ने मेलामा हजारौंले पूजाअर्चना गर्दछन् । यो मेलामा जनैपूर्णिमाको अघिल्लो दिन भगवान शिवको पूजाआजा गरी जनै पूर्णिमाको दिन घर फर्किने गर्दछन् । दुई दिन लाग्ने मेलामा ४० हजारभन्दा बढी भक्तजनले पूजापाठ गर्ने भेरी कर्णाली पर्यटन समितिको दाबी छ । मेलामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि व्यवस्थित बनाउन जिल्ला समन्वय समितिले र महाबु गाउँपालिकाले चासो दिएको छैन ।
जोखिमपूर्ण बाटोको यात्रापछि मेला लाग्ने गन्तव्य पुगिन्छ । मेलामा दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, सुर्खेत, बाँके, अछाम जिल्लाबाट भक्तजन आउने गर्दछन् ।
महाबुमा पुगेर मागेको वरदान पूरा हुने जनविश्वास छ । सन्तान नहुने परिवारले पूरा हुने बुढापाका बताउ“छन् । यहाँ ढुंगाबाटै फुटेर शिवलिंग बनेको देख्न सकिन्छ । निकै अग्लो भूभागमा रहेको रमणीय पाटन क्षेत्रमा एकैछिनमा पानी पर्ने अनि पुनः बादलले ढाक्ने हुँदा पनि पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् । तर, महाबुबारे प्रचारप्रसार हुन नसक्दा अहिलेसम्म आन्तरिकबाहेक बाह्य पर्यटकले पाइला टेकेका छैनन् ।
चिसो र लगातार वर्षा हुने भूभाग भएकाले भक्तजनले कष्टसाथ रात गुजार्नुपरेको भक्तजनले बताएका छन् । दैलेखदेखि महाबुसम्मको सडक स्तरोन्नति हुनसके बाह्रै महिना धार्मिक पर्यटक यस क्षेत्रमा आउने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पे्रमबहादुर थापाको विश्वास छ ।
दैलेख भुर्तीका ब्राह्मणका छोरा जलु आचार्य बोल्न सक्दैनथे । उनी ११३७ सालमा महाबु पाटनमा भैंसी चराउन गएका थिए । गोठालो गएका बेला उनले ढुंगामा सुतेको अवस्थामा महादेव दर्शन पाए । ढुंगामा दिनहुँ दूध चढाउनुपर्ने र कसैलाई यो कुरा नभन्ने सर्तबमोजिम उनलाई बोल्न र वेद पढ्नसमेत महादेवले सक्षम बनाइदिए । पछि दिनदिनै दूध चढाउँदा हल्ला भएर अरूले थाहा पाए । अहिले आचार्य ब्राह्मणले दूधको धारा चढाउने र कालीकोटका ब्राह्मणले होम गर्ने परम्परा निरन्तर छ ।
रासस - April 1, 2020 0
हेमन्त केसी - April 1, 2020 0
जाजरकोट । कर्णाली क्षेत्रमा विशेष गरेर मनाइने चैतेदशैँको रौनक कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण यस पटक सेलाएको छ । जाजरकोट, डोल्पा र कर्णाली...
प्रदेश २ राजधानी समाचारदाता - April 2, 2020 0
प्रमुख नरेन्द्र कार्की - April 2, 2020 0
दार्चुला । आफ्नो देशको प्रवेशद्धारमा ताला लागेपछि नेपालीहरु महाकाली नदी तरेर धमाधम नेपाल फर्किदैछन् । भारतको पिथौरागढ प्रशासनले जवाहरसिंह स्टेडियम,...
प्रमुख विजय नेपाल - April 1, 2020 0
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षणको रिपोर्ट आएको छ । आइसोलेसनमा रहेकामध्ये ३ बिरामीको स्वाव परीक्षण...
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - April 1, 2020 0
अर्थ रासस - April 2, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रु ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । निगम सञ्चालक समितिले...
Breaking News प्रशान्त वली - April 2, 2020 0
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - April 2, 2020 0
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संयोजनमा काठमाडौंमा कोरोना नियन्त्रण सहकारी केन्द्र स्थापना भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम र...
Editor-Picks महेश्वर गौतम - April 2, 2020 0
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना संक्रमणको सन्त्रास कायम रहिरहेका बेला केही शक्तिशाली राष्ट्रले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई धमाधम विमान चार्टर गरेर स्वदेश फिर्ता...
Editor-Picks पूर्णभक्त दुवाल - April 2, 2020 0
काठमाडौं । नोबेल कोरोना भाइरससँग जुध्न सरकारले सात राष्ट्रिय र चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त हुनेबाट आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भएको...
Editor-Picks श्रीकृष्ण सिग्देल - April 1, 2020 0
रासस - April 2, 2020
प्रशान्त वली - April 2, 2020